नेपालमा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि भएलगत्तै चिकित्सकहरुले मुख खोले, दिए यस्तो सुझाव — Sanchar Kendra
१के गुगलले अष्ट्रेलिया छाड्न सक्ने कुरा साँचो हो ?
२५५ लाख रुपैयाँ लगानीमा कुवेतमा खुल्यो नेपाली म:म हाउस
३राजदूत शाक्यले लगाईन कोरोनाविरूद्धको पहिलो खोप
४पोर्चुगलमा कोभिड प्रभावित नेपालीलाई राहत वितरण
५आप्रवासी कामदारको अनुमति (भिसा) रद्द गर्दै कुवेत, कति नेपाली पर्छन मर्कामा ?
६प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आर्मीले बागमतीलाई दियो २३० रनको विजयी लक्ष्य
७बी डिभिजन लिगका खेलाडी क्लबको सम्पर्क बाहिर
८टस हारेको आर्मी ब्याटिङ गर्दै
९युभेन्टस कोपा इटालियाको सेमिफाइनलमा
१०बार्सिलोना कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलमा, मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शन
११प्रधानमन्त्री ओली र ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरूद्धको अपहेलना मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरू
१२जब संवैधानिक इजलासमा गुञ्जियो- न बिर्सेँ तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई…
७संसद विघटनको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा
नेपालमा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि भएलगत्तै चिकित्सकहरुले मुख खोले, दिए यस्तो सुझाव
काठमाडौं । चीनको युहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा देखिए पनि आतङ्कित हुनुपर्ने अबस्था नरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हुनाले सतर्कता भने अपनाउनुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूले सुझाव दिएकाछन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले कोरोना भाइरसको जोखिम भयावह हुनाले यसबाट बच्नुपर्ने बताए । छिमेकी मुलुकमा महामारीको रुप लिएको भन्दै डा. पुनले नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुनसक्ने बताए ।
केहीदिन अघि चीनबाट नेपाल आएका एक विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको थियो । उनले पशुपन्क्षीबाट कोरोना भाइरस सर्ने हुनाले मासु पकाउँदा राम्रोसँग पकाएर खानुपर्ने सुझाव दिए । कोरोना भाइरस पशुमा देखापर्ने भन्दै यो भाइसर मानिसमा देखा परेमा समस्या हुने डा पुनले बताए । नोबेल कोरोना भाइरस नयाँ प्रजातिको भाइरस भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
कोरोना भाईरसको लक्षणमा एक सय चार डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम ज्वरो आउने, श्वासप्रस्वासमा समस्या हुने, रुघाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखापर्ने पुनको भनाई छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेले पछिल्लो समय देखिएको भाइरस नयाँ प्रजातिको भएको बताए ।
कोरोना भाइरस विशेषगरी पशुमा देखापर्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ देखिएको भाइरसले चीनलगायत युरोप, अमेरीका, थाइल्याण्ड, ताइवान लगायतका देशमा देखिएको जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको उपचार गर्न टेकु अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाई थियो । उनले टेकु अस्पतालले चीनबाट आएका विद्यार्थीकोपनि उपचार गरी पठाएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताए । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्षम रहेको उनको भनाई छ । उनले चीनसँगका नाका तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट आउने सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन थालेको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्षलाई बोलायो
नेकपाकाे प्रचण्ड-माधव समूहले आज बुटवलमा विरोध सभा गर्दै
गुडिरहेकाे यात्रुवाहक बस ट्यांकरसँग ठोक्किएर भयानक दुर्घटना, अहिलेसम्म ५३ जनाको मृत्यु
तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना खोप: प्रधानमन्त्री